Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin’ny Jolay 2012
Tonizia: Tambazotra An-tserasera Hanarahana Maso Ny Fanararaotana Diso Tafahoatra Ataon'ny Mpitandro Filaminana
Ny Yezzi dia tambajotra an-tserasera ahafahana maneho firaisan-kina eo amin'ny filazana vaovao na fanaovana tatitra mikasika ny fanararaotan'ny mpitandro filaminana sy ny fanaovan'izy ireo fomba ratsy. Nandritry ny taona maro, tsy nisy nahatsikaritra - ary tsy voasazy ny kolikoly aton'ny mpitandro filaminana ao Tonizia. Miresaka momba izany fomba ratsy izany...
Espaina : Solombavam-Bahoaka Niteny Ratsy Ireo Tsy An'Asa An-Tapitrisa
Mpanoratra Chris Moya · Afrika Mainty
Eo am-pivorian'ny solombavam-bahoaka, Andrea Fabra dia nihiakiaka narahan'ny tehaka "¡qué se jodan!" (' 'asaivo mandeha mi.... any ry zareo !) tamin'ireo tsy an'asa espaniola an-tapitrisa tao aorian'ny nanambaràn'ny filohan'ny governemanta Mariano rajoy ny fepetra henjana mahakasika ny fanampiana sosialy ho an'ny tsy an'asa teo amin'ny tantaran'ny demokrasia espaniola.
Global Voices Podcast: Jambo Avy Any Kenya! Ilay Fivoriamben'ny Global Voices
Mpanoratra Jamillah Knowles · Afrika Mainty
Inona no hoavin'ny mediam-bahoaka ao anaty aterineto? Anatin'ity andiany ity (sy ny manaraka) haheno avy amin'ireo tonian-dahatsoratra, mpanoratra, mpiara-manorina sy ireo mpandray anjara hafa tamin'ny Vovonamben'ny Mediam-bahoaka Global Voices 2012 tany Nairobi ianao mikasika ny hoavin'ny fiaraha-miasanay ao anaty aterineto.
17 Jolay 2012
Sodàna: Bilaogera Mitantara Ny Famotorana Natao Azy Nandritra Ny Telo Andro
Mpanoratra Amira Al Hussaini · Afrika Mainty
Nosoritan’ ilay bilaogera Sodaney Maha Elsanosi mazava tsara ny famotorana natao azy izay naharitra telo andro tao amin'ny Sampan-draharaha nasionaly misahana ny Fitsikilovana sy ny Fiarovana (NISS), taorian'ny fisamborana azy tao Sodàna. Tao amin'ny lahatsoratra izay tokony hovakiana, Maha, izay tsy iza fa mpanoratra Sodàna ato amin'ny Global Voices ihany, nitantara toy izao: Nandritra...
Ekoatera: Manao Veloma An’i George ilay Sokatra Manirery
Mpanoratra Alison Martinez · Amerika Latina
George ilay manirery avy ao amin’ny nosy Galápagos ao Ekoatera no sokatra niangana farany tamin’ny karazany. Hita tamin’ny Asabotsy maraina 24 Jiona 2012 teo ny fatiny, tao amin’ny tokontany nonenany misy ny foibe fiompiana sokatra Galápagos aoPoerto Ayora, Nosin’i Santa Cruz. George no sokatra farany amin’ny karazana Chelonoidis abingdonii, teo amin’ny faha-150 taonany...
Espaina : Fanohanana Ny Tolon'ny Mpitrandraka, “Eny, Misolo Tena Anay Ry Zareo !”
Mpanoratra Elena Arrontes · Eoropa Andrefana
An'arivony ny olona nidina an-dalam-be haneho firaisankina sy fanohanana ny hetsik'ireo mpitrandraka arin-tany espaniola ny 10 jolay, teo am-pahatongavana tany Madrid rehefa nandeha 400km avy any avaratr'i Espaina. Nolavin'ireo mpitrandraka ny fepetram-pitsitsian'ny governemantan'i Mariano Rajoy sy ny fihenan'ny fanampiana noraisiny.
16 Jolay 2012
Shina: Miparitaka Ny Adihevitra ‘Tsy Fahafahana Ny Fanaovana Sesitany’
Mpanoratra Violeta Camarasa · Azia Atsinanana
Namerina nanokatra adihevitra momba ireo mpomba sy mpanohitra ny fanaovana sesitany i Chen Guangcheng. Ho very ve ny fanohanana an'i Chen sy ny fahefany raha mandao an'i Shina izy? Ary hamela azy hiverina an-tanindrazana ve ny governemanta Shinoa taorian'ny fifampikasohany tamin'i Etazonia?
Mpanoratra Andrea Arzaba · Amerika Latina
Mifidy Izay ho Filoham-pireneny Manaraka ny Meksikana
Nandeha tany amin'ny birao fandatsaham-bato ny Meksikana tamin'ny 1 Jolay hanao ny fifidianana ny ho filoham-pireneny. Nanomboka nizara ny heviny sy ny traikefany ihany koa ireo mponin'ny aterineto raha vao nisokatra ny birao fandatsaham-bato. Nikarakara tranokala sy tenifototra ihany koa izy ireo hanangonana ireo tatitra mikasika ny hosoka sy ny...
10 Jolay 2012
Kiobà: Mampiantrano Fetibenà Tambajotra Sosialy i Havana
Mpanoratra Joan Antoni Guerrero Vall · Amerika Latina
Notanterahana tany Havana, Kiobà ilay Festival Clic na "Fetiben'ny 'Click'", nokarakarain'ireo mpitoraka bilaogy tany amin'io Nosy io, ny tena misongadina tamin'izany dia i Yoani Sánchez, tompon'ilay bilaogy Generación Y.